Ciyaaraha Fudud | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Ciyaaraha Fudud
Mo farax oo kaalinta 3aad ka galay Orodka Marathonka.
Ororyahanka Asalkiisu Soomaaliga yahay ee u orda Dalka Ingiriiska mo faarax ayaa waxaa uu shalay kaalinta 3aad ka galay Orodka Marathonka ee ka dhacay Magaalada London. Eliud Kipchoge, oo u dhashay Dalka Kenya ayaa galay kaalinta 1aad,waxaana uu ka faa’ideystay Maxamed Faarax oo mar seexday inta Orodka lagu jiray. Mo Farax inkasta oo uu kaalinta saddexaad ku dhameystay haddana waxaa ...
Mayweather: “guushii 50aad ee aan maanta gaaray ayaa iigu dambeysay!”
Feeryahanka Reer Mareykan ee Floyd Mayweather ayaa ku dhawaaqay in uu si rasmi ah uga fariistay Ciyaaraha Feerka kaddib markii uu Saaka garaacay feeryahanka Reer Irish ee Conor McGregor. Ciyaartii saaka ka dhacday Garoonka T-Mobile Arena ee Gobolka Las Vegas ayaa la soo gaba gabeeyay kaddib markii wareeggii 10aad uu Floyd ku daayay Conor Feer miisaan weyn lahaa,taas oo garsooraha ku qasabtay in uu ...
DEG-DEG: Leonel Messi Oo Ganaax Garka Loo Geliyay! Sabab?
Xiriirka kubada cagta aduunka ee FIFA gaar ahaan qaybta ciqaabta ayaa waxaa ay shaacisay in xidiga xulka argentina ee Leonel Messi lagu ganaaxay inuusan xulkiisa usafan afar kulan. FIFA ayaa bayaanka ay soo saartay waxaa ay ku xaqiijisay inuu Messi ganaaxan mutaystay kadib markii uu hooyadii wax kasheegay calan wadihii dhex dhexaadinayay kulankii ay xulka Argentina laciyaartay xulka Chile kulan ...
Juventus oo dalabkeeda ugu dambeeyay ka gudbin doonta Marco Verratti.
Sida ay kusoo waramayso Corriero dello Sport, kooxda Juventus ayaa go’aan ku gaartay inay weerarkeeda ugu dambeeyay ku qaado khadka dhexe kooxda PSG ee Marco Verratti. Wargayska talyaaniga ayaa kusoo waramaya in kooxda marwada duqda ah ay da’yarkan u diyaarisay qiime lacageed sareeya waxayna kooxda PSG miiska usaari doontaa aduun lacageed gaaraya 80 milyan oo yuuro si ay ufasaxaan ciyaaryahankan ...
Bayern Munich oo kusoo biirtay loolanka loogu jiro Alexis Sanchez.
Kooxda Bayrn Munich ayaa lagu soo waramayaa inay ugu cad cadahay saxiixa weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez marka lagaaro suuqa kala iibsiga xagaaga. Ciyaaryahanka xulka Chile ayaa lala xiriiriyay inuu iskaga tago kooxda Arsenal kadib markii ay kooxda Arsenal kufashilantay inay heshiis cusub kasaxiixdo. Sanchez iyo Arsenal ayaa wada hadalo ku wada jiray mudo bilo ah, balse waxaa lagu ...
Marcus Rashford oo sheegay inuu wax kabarto Weyne Rooney, Zlatan Ibrahimovic iyo Gary Cahill.
Da’yarka Manchester United ee Marcus Rashford ayaa amaanay guulihii ay ka gaareen xidigo ay kamid yihiin Zlatan Ibrahimovic and Wayne Rooney. 19 jirkan ayaa xili ciyaareedkan kooxdiisa iyo xulkiisa u dhaliyay todoba gool 42 kulan oo uu usaftay, balse keydka uu xili ciyaareedkan galay ayaa wax u dhintay gool dhalintiisa. Si kastaba, Rashford ayaa shaaca ka qaaday in uu wax ...
Madaxweynaha FIFA ee Gianni Infantino oo si layaab leh u kala doortay xidiga wanaagsan Cristiano Ronaldo iyo Leonel Messi!
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta aduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa si layaab leh uga jawaabay mar wax laga waydiiyay cida wanaagsan Cristiano Ronaldo iyo Leonel Messi, su’aalaha kusaabsan Ronaldo iyo Messi ayaana ah su’aalaha muranka ugu badan dhaliya sanadihii ugu dambeeyay. Leonel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa dowr weyn ka ciyaaray guulihii ay sanadihii ugu dambeeyay gaareen kooxaha Barcelona iyo ...
Sergio Ramos oo sheegay inay soo dhowayn doonaan hadii uu kooxdooda kusoo biiro Kylian Mbappe.
Daafaca kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa sheegay inay gacmo furan kusoo dhowayn doonaan hadii uu Kylian Mbappe kusoo biiro kooxda Real Madrid. 18 jirkan u ciyaara Monaco ayaa kamid ah xidigaha ugu halista badan oo ka ciyaara weerarka, waxaana lagu soo waramayaa inay xiiseenayaan kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Manchester United. Mbappe oo xulkiisa France u saftay kulankii ...
Manchester United oo diyaar u ah inay dalab aan ladiidi Karin ka gudbiso Neymar!
Sport oo kasoo baxda Spain ayaa kusoo waramaysa in weeraryahanka Barcelona ee Neymar uu xiiso xoogan ka helayo kooxda reer England ee Manchester United. Wargayska ayaa maanta bogiisa hore lagu daabacay sawirka Neymar iyo faah faahin kusaabsan dalabka ay Manchester United kasoo gudbisay taasi oo kadhigaysa ciyaaryahanka ugu qaalisan taariikhda kubada cagta. Sida wargayska Sport lagu daabacay, maamulka kooxda Manchester ...
Barcelona oo xiisaheeda ka weecisay Hector Bellerin, sidookale Barca ayaa bedelka xidigan ka heshay horyaalka Spain.
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay go’aan ka gaartay xiisahooda ku aadanaa daafaca garabka midig xulka Spain iyo kooxda Arsenal ee Hector Bellerin. Kooxda reer Catalan ayaa mudo ku raad joogtay saxiixa da’yarkan waxayna dhowr jeer isku deyeen inay Arsenal ku qanciyaan inay ka iibiyaan xidigooda balse The Gunners ayaa ka madax adeegtay dalabaadka Barca. Bellerin ayaa kooxda Barcelona ...
Kostas Manolas oo albaabka u furay kooxda Chelsea kadib markii uu sheegay inuu Radja Nainggolan uu Roma ka tegi karo xagaaga.
Daafaca kooxda Roma ee Kostas Manolas ayaa kahadlay macquul ahaanshiyaha inuu Radja Nainggolan ka tago kooxda Roma marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga. Xidigan xulka Greece oo ka hadlaya xaalada xidiga ay isku kooxda yihiin ayaa yiri “inkastoo Nainggolan uusan jeclayn roobka, hadana waa mid kamid xidigaha khadka dhexe ee ugu wanaagsan aduunka” “waxaa macquul ah inuu kubiiro mid ...
Kooxda Chelsea oo u soo yeeraya war naxdin leh!
Kooxda Chelsea ayaa war xun u soo yeeray kadib markii uu dhaawac soo gaaray Diego Costa iyo Thibout Courtois. Weeraryahanka kooxda Chelsea ayaa ku khasbanaaday inuu tababarka xulka Spain ka baxo kadib markii uu lugta kasoo gaaray dhaawac, waaxda caafimaadka Spain ayaana shaaciyay in lugta xidigan ay soo gaartay dhaawac aan sahlanayn. Weli wuxuu Costa ku jiraa baaritaano lagu ogaanayo ...